MYANMAR ROHINGYA: WAXA AAD U BAAHAN TAHAY IN AAD KA OGAATO! – Xeernews24
MYANMAR ROHINGYA: WAXA AAD U BAAHAN TAHAY IN AAD KA OGAATO!
24. Oktober 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Inay u badheedhaan khatar xagga badda ah ama lug ah, ayaa in ka badan nus malyan waxay ku kalliftay inay ka cararaan burburka guryahooda iyo dilka ka socda waqooyiga gobolka Rakhine ee Myanmar (Burma) oo ay u qaxaan Bangladesh tan iyo August,
Dhowrkii sano ee ka horreeyey qalaalaasahan ugu dambeeyey, kumanaan Rohingya ah ayaa galayey safarro khatar badan oo ay Myanmar kaga baxayaan, si ay uga badbaadaan dhibaatada ka soo gaadhaysa shacabka ama xadgudubyada la sheegay inay kula kacaan xoogagga amniga.
Qaxa ugu dambeeya ayaa billowday 25 August, markii mintidiinta Rohingya ee loo yaqaanno Arsa ay weerareen in ka badan 30 goobood oo booliska saldhigyo u ahaa.
Dadka Rohingya ee imaanaya deegaanka loo yaqaanno Cox’s Bazaar – oo ah degmo ku taalla Bangladesh – ayaa sheegaya inay ka soo carareen askarta oo ay taageerayaan dad cadhaysan oo Buddhist ah, kuwaasoo jawaabta ay bixinayeen ay ahayd inay tuulooyin gubaan, dad rayid ahna ay weeraraan oo ay dilaan.
Xukuumaddu waxay sheegaysaa in “hawlgalka lagu nadiifinayo” mintidiinta uu dhamaaday 5tii Sebtember, laakin wariyeyaasha BBC waxay arkeen caddaymo muujinaya inay sii socdeen taariikhdaas ka dib.
Ugu yaraan 288 tuulo ayaa qayb ahaan ama gabi ahaan dab lagu burburiyey waqooyiga Rakhine wixii ka dambeeyey August,2017, sida uu muujinayo muuqaal dayax gacmeed lagu qaaday oo ay sii deysay Human Rights Watch.
Human Rights Watch waxay sheegtay in burburka badankiis uu ka dhacay magaalada Maungdaw muddadii u dhaxaysay 25 Agos – 25 Sebtember, halkaasoo tuulooyin badan lagu burburiyey wixii ka dambeeyey 5 Sebtember, markii hogaamiyaha Myanmar, Aung San Suu Kyi, ay sheegtay in hawlgalkii ciidanka amniga uu dhamaaday.
Ka hor August.waxaa jiray ilaa 307,500 oo ah qaxooti Rohingya ah oo ku jiray xeryo sida ay sheegayso UNHCR.
Qaxootiga gaadhay Bangladesh badankood – kuwaasoo isugu jiray rag, dumar, iyo carruur aan waxba sidan – ayaa goobahaas ka raadsaday meelo ay galaan, waxayna teendhooyin ka samaysteen meelaha suurto galka ah ee ku yaalla dhulkaas adag, iyagoo aan haysan gargaar macno leh, biyo la cabo, cunto, hoy, ama daryeel caafimaad.
537,000 ee ah qaxootiga yimid tan iyo August.58% waxay ahaayeen carruur, halka 60% dadka qaan gaadhka ahna ay dumar ahaayeen.
Halka xerada Kutupalong ay fidday min 13,901ilaa 20,000 tan iyo August, ayaa dadka ku nool cooshadaha ama deegaannada dibadda ka ah xerada waxay kor u kaceen min 99,495 ilaa 311,225.
Goobaha kale ee gobolka ayaa iyaguna balaadhay. Bartamihii October 2017 waxaa jiray 14 goobood oo ay ku jireen 10,000 oo qof.
Waxaa kaloo jira 145,651 ku noo xeryaha dibadooda.
720,000 oo caruur ah ayaa u baahan gargaar bani’aadminimo sida ay UNICEF sheegayso.
500 oo tan oo gargaar ah ayaa xagga cirka lagu gaadhsiiyey.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa weydiistay Myanmar in ay joojiso dhibaatada, laakin wax xayiraad ah laguma soo rogin.
Shiinuhu wuxuu sheegay in beesha caalamku “taageerto dadaalka ay Myanmar ku dhowrayso deganaanshaha horumarka dalkeeda”.
Bangladesh waxay qorshayanaysaa inay dhisto meelo badan oo ah hoy ay galaan qaxootiga oo ku yaalla Cox’s Bazaar, waxayse kaloo doonaysaa inay dhaq-dhaqaaqooda ku xaddiddo goobaha loo asteeyey.
Guddiga Masiibooyinka degdegga ah ee UK ayaa qaaday codsi uu ku doonayo dhaqaale lagu caawiyo qaxootiga iyo qowmiyadaha ay dul dageen ee ay culayska ku yihiin. Ra’iisul wasaare Theresa May waxay kaloo sheegtay in loo baahan yahay in falalka milateri ee Rakhine ay istaagaan. UK waxay joojisay casharradii ay siin jirtay militariga Myanmar.
Xigasho, BBC Somali
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/10/98444496_rohingya_map.jpg 351 624 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-24 08:31:072017-10-24 08:31:07MYANMAR ROHINGYA: WAXA AAD U BAAHAN TAHAY IN AAD KA OGAATO!
Talisyada Ciidan ee Xoogga dalka iyo Howl galka AMISOM oo kulamay (Sawirro)